Toyota Cares Campaign – Toyota Mingalar
Toyota Cares Campaign
Toyota မှ လူကြီးမင်းတို့ကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်သစ်လေးတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီနော်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေကို သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကားများမောင်းနှင်နိုင်ရန် Toyota မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့မှစပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကုန်တဲ့အထိ Toyota မော်ဒယ်လ်အသစ်တွေထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်စီး မှာယူသူတိုင်းကို ကားအတွင်းလေသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ကိရိယာ နှင့် ကားအတွင်းပိုင်း သန့်စင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Toyota Mingalar Brand New Car Showroom
အမှတ် (၆) ဘုရင့်နောင်လမ်းနဲ့ ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့
(မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီခွဲ အတွင်း တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်)
Showroom Hotlines: 01 514940 ~ 41, 09 40540 2233
Sale Persons: 09 976 701649,09 267 757 033,09 976 990009,09 695 280536,09 42102 8955,09 785 084176,09 785 353487,09 787 004668,09 976 292095 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Toyota Cares Campaign launches today!
Toyota မှ လူကြီးမင်းတို့ကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်သစ်လေးတစ်ခုကို စတင်လိုက်ပြီနော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေကို သန့်ရှင်းပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ကားများမောင်းနှင်နိုင်ရန် Toyota မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့မှစပြီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကုန်တဲ့အထိ Toyota မော်ဒယ်လ်အသစ်တွေထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်စီး မှာယူသူတိုင်းကို ကားအတွင်းလေသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ကိရိယာ နှင့် ကားအတွင်းပိုင်း သန့်စင်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှု မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Toyota Mingalar Brand New Car Showroomအမှတ် (၆) ဘုရင့်နောင်လမ်းနဲ့ ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့(မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီခွဲ အတွင်း တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့အထိ လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်)အသေးစိတ်ကိုShowroom Hotlines: 01 514940 ~ 41, 09 40540 2233Sale Persons: 09 976 701649,09 267 757 033,09 976 990009,09 695 280536,09 42102 8955,09 785 084176,09 785 353487,09 787 004668,09 976 292095 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။(Unicode version)Toyota မွ လူႀကီးမင္းတို႔ကို ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္သစ္ေလးတစ္ခုကို စတင္လိုက္ၿပီေနာ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝယ္ယူအားေပးသူေတြကို သန႔္ရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ကားမ်ားေမာင္းႏွင္နိုင္ရန္ Toyota မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႕မွစၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြကုန္တဲ့အထိ Toyota ေမာ္ဒယ္လ္အသစ္ေတြထဲမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာတစ္စီး မွာယူသူတိုင္းကို ကားအတြင္းေလသန႔္စင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးတဲ့ ကိရိယာ ႏွင့္ ကားအတြင္းပိုင္း သန႔္စင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေမတၱာလက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။Toyota Mingalar Brand New Car Showroomအမွတ္ (၆) ဘုရင့္ေနာင္လမ္းနဲ႕ ႐ြာမေက်ာင္းလမ္းေထာင့္၊ လွိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕(မနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီခြဲ အတြင္း တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕အထိ လာေရာက္ေလ့လာနိုင္ပါတယ္)အေသးစိတ္ကိုShowroom Hotlines: 01 514940 ~ 41, 09 40540 2233Sale Persons: 09 976 701649,09 267 757 033,09 976 990009,09 695 280536,09 42102 8955,09 785 084176,09 785 353487,09 787 004668,09 976 292095 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ရွင့္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။(Zawgyi version)Toyota Cares Campaign launches today!To provide clean and hygienic cars for our customers, Toyota will give Free Denso Ionizer (air purifier) & Free Toyota Cabin Disinfecting Service for customers who book new Toyota models from 15th June20 onwards.*While stock lasts! Terms and Conditions apply.Toyota Mingalar Brand New Car ShowroomAddress: No.6, Bayint Naung Road, Ward (2), Hlaing Township, Yangon TEL: (01) 514940 ~ 41, (09) 976990009, (09) 785084176, (09) 421028955, (09) 976292095, (09) 785353487, (09) 787004668, (09) 695280536 #BecauseWeCareForYou#ToyotaMyanmar #TogetherTomorrowToyota #ToyotaCaresCampaign
Posted by Toyota Mingalar on Sunday, 14 June 2020
Comments Off on Toyota Cares Campaign